News & Media - Ministry of Health (MOH) Myanmar
ဇူလိုင် ၁, ၂၀၂၂
အလွဲလေးတွေ ဟာသလေးတွေဆိုတာ လူတိုင်းကြုံဖူးကြမှာပါ။ ဆေးရုံဆေးခန်းတွေမှာ ဆရာဝန်/လူနာ အလွဲဟာသလေးတွေ ရှိတတ်သလို အခုလို အွန်လိုင်းကနေ အခမဲ့ကုသပေးချိန်မှာလည်း အလွဲလေးတွေကနေ ပြေးလို့မလွတ်ခဲ့ပြန်ပါဘူး… များသောအားဖြင့် စာစီစာရိုက်မှားတာ၊ အကောင့်တွေမှားတာမျိုးဆိုပေမယ့်...
“အသိသတိ ရှိရှိနဲ့ ပစ္စုပ္ပန်မှာ နေထိုင်ရှင်သန်ခြင်း” လူမှန်ရင် ဒုက္ခနဲ့မကင်းတာမှန်တာမို့ ဘဝမှာ ခံစားကြုံတွေ့ရသမျှကို အဲဒီခဏမှာ အသိသတိ အပြည့်ကပ်ပြီး တည့်တည့် ချဉ်းကပ်ကိုင်တွယ်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်။ အတိတ်ဟာ ကုန်လွန်ခဲ့ပြီးတဲ့အရာဖြစ်ပြီး...
ဇွန် ၃၀, ၂၀၂၂
ဒီတစ်ခေါက်မျှဝေလိုတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ အမျိုးသမီးတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ Menopause “သွေးဆုံးကိုင်ခြင်း” ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသားများလည်း မိမိရဲ့မိခင်၊ ချစ်သူ၊ ဇနီး၊ မိသားစုဝင်အမျိုးသမီးများကို စောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့ သိထားသင့်ပါတယ်နော်။ အမျိုးသမီးတွေ အပျိုဖော်ဝင်ချိန်မှစပြီး...
အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဇော်ဝေစိုးနှင့် ဧရာဝတီသတင်းဌာန ဆက်သွယ်မေးမြန်းချက် (ရုပ်/သံ)
ဇွန် ၂၉, ၂၀၂၂
တော်လှန်ရေးကာလ ၁ နှစ်အတွင်း အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ(NUG)၏ ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ အပေါ် လုပ်ဆောင် ထားနိုင်မှုအခြေ အနေများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအများအပြားက စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို အကြမ်းမဖက် အာဏာဖီဆန် ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM...
Acute and Chronic Pancreatitis ( မုန့်ချိုအိတ်ရောင်ခြင်း) ( June 2022 )
မုန့်ချိုအိတ်ရောင်ခြင်း ( Acute and Chronic Pancreatitis ) ( June 2022 ) မုန့်ချိုအိတ်ရောင်ခြင်းက ဘယ်လိုလူတွေမှာ အဖြစ်များပါသလဲ •...
Genital Wart/ Anal Wart(လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ အကြောင်းသိကောင်းစရာ) ( June, 2022 )
ဇွန် ၂၇, ၂၀၂၂
လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ အကြောင်းသိကောင်းစရာ (Genital Wart/ Anal Wart) ( June, 2022 ) လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့ဟာ Human papillomavirus (HPV ဗိုင်းရပ်စ်)...